Mukuvakwa kwepa-saiti, hupenyu hwebasa rerambi reLED uye mhedzisiro yekushandisa kwayo zvakabatana zvakanyanya nekupisa kwayo kupisa. Kana kupisa kwekupisa kweiyo mwenje we LED isina kunaka, zvinokanganisa zvakananga hupenyu hwebasa rwechigadzirwa uye nemhedzisiro yekushandisa. Naizvozvo, iro basa redhiyo radiator rinonyanya kukosha. Kazhinji, kuumbwa kwemwenje kunoumbwa neOD, chimiro chekupisa kupisa, mutyairi, uye lens. Chikamu chakakosha kwazvo chekupisa kwake dhizaini ndiko kupisa kweUSD. Pazasi isu tichaunza zvakadzama nzira dzinojairika dzekupisa kupisa kwema LED radiators.
Nhanganyaya kune yakajairwa kupisa nzira yekuparadza ye LED radiators:
1. LED kupisa singi-aluminium kupisa singi zvimbi
Aluminium inoburitsa zvimbi ndiyo inowanzo shandiswa kupisa kupisa nzira kune LED radiator, kunyanya kuwedzera kupisa kupisa nzvimbo yeiyo radiator kuburikidza nealuminium inoburitsa zvimbi.
2. LED kupisa singi-inotonhorera inoitisa plastiki ganda
Iyo yekupisa inoitisa epurasitiki ganda inotsiva iyo aruminiyamu chiwanikwa ne LED kuputira uye kupisa kupisa kupurasitiki kuti iwedzere kupisa kupisa mwenje kugona kuzadzisa chinangwa chekupisa kupisa.
3. LED kupisa singi-pamusoro radiation kurapwa
Surface radiation kurapwa ndiko kuisa kupisa kwekupisa kupisa pamhepo pamusoro pechigadziko cheLED kupenya kupisa kubva pamusoro penzvimbo yemwenje kuzadzisa chinangwa chekupisa kupisa.
4. REDI radiator — mhepo inonaya mvura
Mhepo inoyerera michina inoshandisa chimiro cheimba yemwenje yeLED kugadzira mweya unogonesa kuzadzisa chinangwa chekupisa kupisa. Iyi zvakare ndiyo yazvino-yakachipa-mutengo yakasimbiswa yekupisa kupisa nzira.
Idzi dziri pamusoro ndidzo nhanhatu nzira huru dzekuparadza kupisa dzinowanzo kune ma radiator e LED.
Pfupiso yezvimwe zvezvinetso zveDVD kupisa kupisa, nzira yakanakisa yekudzimisa kupisa kwemwenje yakatungamirwa, dambudziko rekuparara kwekupisa kwerambi rakatungamirwa, chii chichaitika kana kupisa kupisa kweye yakatungamira mwenje bead isiri yakanaka, iyo kupisa kupisa pad yemwenje yakatungamirwa bead inoda kuiswa inshuwarheni, iyo yekupisa nzira yekudzimisa yemwenje yakatungamirwa, uye nzvimbo yekupisa yekuparadza yeiyo yakatungamirwa mwenje bead, Kuzvigadzira-yakatungamirwa mwenje bead kupisa kupisa kudzora, yakatungamira mwenje bhudzi kupisa kupisa kudzima silicone girisi, 1w yakatungamira mwenje bead inoda kudzimisa kupisa, yakatungamirwa mwenje bhudzi kupisa kudzikisira dhizaini, yakatungamira mwenje bhudzi kupisa kupisa 1w ingani nharaunda, yakatungamira mwenje bhudzi kupisa dissipation aruminiyamu ndiro tembiricha, yakatungamirwa mwenje bhudzi kupisa kudzima kuverenga nzira uye fomula, mwenje mwenje kupisa kupisa kwakakura, mwenje we LED mwenje kupisa kupisa kwakakosha, kwakatungamira mwenje bhudzi kupisa tembiricha uye nguva.
Post nguva: Sep-24-2021
Chii chikonzero chekuzivikanwa kwe ...
Nekukurumidza kukura kwehupfumi hwekutengeserana, zvinodiwa nevanhu zvenzvimbo yekutenga zvave zvakakwirira uye zvakakwirira, zvinoreva kuti kushongedzwa kwechitoro nekugadzirwa kwevatengesi kwave ...
Iyo nzira, nzira uye inoshanda applicati ...
Nekuda kwekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwezvitsva zvemwenje zvitsva, zvishandiso zvitsva uye marambi matsva nemarambi, maitiro ehunyanzvi ekugadzirisa achishandisa magetsi ekugadzira ari kuwedzera zuva nezuva, achitipa wi...
Nzira yekuziva sei led panel lights?
Kuenzaniswa nemamwe mwenje, iyo LED pani mwenje ine mabhenefiti akanaka: Ultra-yakaonda, yakanyanya kupenya, yekupedzisira-simba-inoponesa, yekupedzisira-yakareba hupenyu, yekupedzisira-yekuchengetedza uye isinganetseke-isina! Saka, sei kuziva led panel magetsi? 1. Tarisa t...
LED Linear Chiedza Mazano
LED linear mwenje inonziwo mutsara madziro washer mwenje. Inoshandisa PCB yakaoma mabhodhi kuunganidza mapuranga edunhu. Mabheji emwenje anogona kuve neSMD kana COB. Zvikamu zvakasiyana zvinogona kusarudzwa zvichienderana nenzvimbo chaiyo ...
900w akatungamirira Flood Light, Akatungamirira Floodlight 30w, Akatungamirira Solar Rechargeable Flood Light, akatungamirira Tri-Zvinoratidza Light yechigarire , Ceiling Led Panel Light , Philips 3030 akatungamirira Flood Light,